Ejipta: Ny raharaham-pitsarana ambony an’i Kareem · Global Voices teny Malagasy
Ejipta: Ny raharaham-pitsarana ambony an'i Kareem
Voadika ny 06 Jolay 2018 3:00 GMT
Andrasana hohenoin'ny fitsarana ao Alexandra ny 12 Martsa ny rahaharam-pitsarana ambony an'ilay bilaogera Ejipsiana Kareem Nabeel Sulaiman
Nametraka tantara ity bilaogera Ejipsiana ity tamin'ny volana lasa teo noho izy mpanoratra voalohany voasazy efa-taona an-tranomaizina ao amin'ny firenena noho ny lahatsoratra navoakany tao amin'ny bilaoginy.
Voampanga ho nanala-baraka ny Silamo sy nanevateva ny filoha Ejypsiana Hosni Mubarak ity lehilahy 22 taona, mpianatra teo aloha tao amin’ny Oniversite Al Azhar ity. Nokianin'ireo bilaogera, mpanoratra, mpikatroka zon'olombelona sy mpiaro ny fahalalahana miteny manerantany ny sazy, ary nitaky ny famoahana azy tsy misy hatak'andro izy ireo.
Bilaogera namana Freedom for Egyptians nandefa lahatsoratra miresaka ny manjo an'i Kareem.
“Amin'ny maha bilaogera mpiray tanindrazana Ejipsiana, manohana an'i Karim aho, satria tsy hanohana velively ireo dingana natao hampihorohoroana olom-pirenena tsy manan-tsiny izay mampihatra ny zony amin'ny fahalalaham-pitenena aho ary satria tsy ho anisan'ny fitsarana mpanao fanadihadiana amin'ny taonjato faha-21 aho. Nitsara an-tondromolotra ireo fitsarana ireo ary tsy nisy ny fampiakarana ny raharaha ambony tahaka ny Lalànan'hy hamehana tany mihotakotaka ankehitriny sy ny fitsarana ara-miaramila mihatra ao Ejipta”, hoy izy.
“Nandritra ny Vanim-potoana Antenantenany teo anelanelan'ny taonjato faha-5 sy faha-15, tsy toerana ara-pivavahana ihany ny fiangonana katolika, fa toerana manankarena ara-bola goavana koa izay mitsabaka sy mampiasa hery amin'ny politika tao Andrefana. Manan-jo haneho ny heviny ara-politika ny Al-Azhar, toeram-pivavahana Sonita lehibe indrindra ao Ejipta sy Afovoany Atsinanana, ary mandefa ireo olona voampanga amin'ny fivadiham-pinoana ho eny amin'ny fitsarana sy ny fonja. Raha tsy dia mampidi-doza loatra ny fepetra fandefasana olona any am-ponja tahaka an'ilay bilaogera Abdel Karim, mety hitarika any amin'ny fanatisma Islamika na ekstremista hamarana tanteraka ny fahalalahany miteny amin'ny alalan'ny fandatsahana ny ràny ny Fatwa (hevitra ara-pivavahana). Ny toeram-pivavahana ao Kairo dia tohanan'ny governemanta ara-bola ary mpiasam-panjakana no mpiasan'izy ireo.
Tranonkala natsangan'ny vondrona mpanohana an'i Kareem namoaka izao manaraka izao:
Tao ivelan'ny efitranom-pitsarana an'i Abdul Kareem, Ejiptiana maro no nitaky ny fanagadrana azy, ary lasa lavitra nitaky ny hitora-bato azy ireo ekstremista. (Aoka isika tsy hanadino ny mpampanoa lalàna izay nitaky ny hanaovana “jihad” amin'i Kareem.)
Noho izany dia mampahery kokoa ho an'izao tontolo izao ny mahita fa maro amin'ireo Ejipsiana, Arabo sy Silamo no miaro ny zon'i Kareem haneho ny heviny. Raha ny marina, nanangana sehatra iray natokana ho an'ny ‘Feon'ny Arabo & Miozolomana ho an'i Kareem’ izahay mba hanaporofoana izany.”
Azo jerena ao amin'ny www.freekareem.org ny fanehoan-kevitra bebe kokoa momba ny raharahan'i Kareem.